केपीले गरे घोषणाभावी मन्त्रीहरुको, यि हुन् उनको नजरमा ? – Saurahaonline.com
केपीले गरे घोषणाभावी मन्त्रीहरुको, यि हुन् उनको नजरमा ?
काठमाडौं, कात्तिक २७ । मंसिर १० हुने पहिलो चरण र मंसिर २१ हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनावी माहोल तताउन उम्मेदवारदेखि सम्बन्धित पार्टीका शीर्ष नेता व्यस्त छन् ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अलि बढी सक्रिय देखिन्छन् । उनीहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक पार्टीका अन्य उम्मेदवारका लागि पनि भोट माग्न व्यस्त छन् । पार्टीका उम्मेदवारको चुनावी सभामा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित भएर भोट मागिदिएका छन् ।
चुनावी प्रचार प्रचण्डको भन्दा ओलीको निकै फरक देखिन्छ । फरक यो मानेमा कि, उनी जुन उम्मेदवारको चुनावी सभामा पुग्छन, ती उम्मेदवारलाई भावी सरकारको मन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरिहाल्छन् ।
पार्टी सचिव योगेश भट्टराईको चुनावी सभामा सहभागी हुन ताप्लेजुङ पुगेका ओलीले भट्टराई सम्भावना बोकेको नेता भएको भन्दै भावी मन्त्रीको रुपमा सार्वजनिक गरिदिए । ‘योगेशलाई जिताएर पठाउनुस, म मन्त्रीको बिल्ला भिराएर फर्काउँछु,’ अघिल्लो साता उनले भनेका थिए, ‘यस्तो युवा, यस्तो अनुभवी, पार्टीले विश्वास गरेको, मैले विश्वास गरेको, देशले विश्वास गरेको, ताप्लेजुङका जनताले विश्वास गरेको युवा मस्तिस्क हो योगेश । तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् ।’ योगेशको सवालमा मन्त्रालय भने उनले तोकेनन् ।
अघिल्लो मंगलबार काठमाडौं क्षेत्र नं। ५ काने चुनाव प्रचारमा पनि ओलीले अर्का मन्त्री तोकिदिए । क्षेत्र नं ५ का उम्मेदवार पार्टी महासचिव इश्वर पोखरेललाई उनले भावी उपप्रधानमन्त्री बनाइदिए । ‘ईश्वरजीले अघिल्लो चुनावमा हारेकोमा आश्चर्य लागेको छ । ०७० सालमा सूर्यमा ग्रहण लाग्यो, तर यसपटक लाग्दैन,’ ओलीले भने, ‘ईश्वरजी प्रधानमन्त्री हुने योग्यता राख्नुहुन्छ, प्रधानन्त्री अरुको भागमा परे उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’
पोखरेलको चुनावी प्रचारमा बोलेको दुई दिनपछि अर्थात् गत बिहीबार काठमाडौं क्षेत्र नं। ४ मा ओली उम्मेदवार राजन भट्टराईको चुनावी कार्यक्रममा उपस्थित भए । उनले भट्टराईलाई पनि भावी मन्त्रीको बिल्ला भिराए । ‘राजन भट्टराईले चुनाव जित्नुहुन्छ । उहाँलाई चाबहिलबाट संसद्, ससद्बाट चाबहिल फर्किन मात्रै टिकट दिएको होइन,’ ओलीले भने, ‘विदेश मामिलाविज्ञ हुनुहुन्छ, माधव नेपालले प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार बनाउनुभयो, मेरो पालामा विदेश नीति नै बनाउनुभयो, अब बुझ्नुस, उहाँको भूमिका अबको सरकारमा के हुन्छ रु’ ओलीको मतलब थियो, भट्टराई भावी सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री बन्ने छन् ।
आसन्न चुनावमा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने र पाँच वर्ष सरकार चलाउने दाबी गरिरहेको छ । तर, वाम गठबन्धनमा एमालेबाहेक मुख्य दलका रुपमा माओवादी केन्द्र पनि छ । भोलि यी दुई पार्टी बेग्लाबेग्लै या एकै दलमा गाँसिएर सरकार चलाए भने पनि सबै ओलीले नै सोचेजस्तो होला भन्न सकिन्न । हुन त ओलीले आफ्नो भागमा पर्ने मन्त्री छान्न पनि सक्लान्, तर मन्त्रालय कुन हुने भन्ने कसरी अहिल्यै होला र रु तर, उनले मन्त्रालयसमेत तोकेर उम्मेदवारलाई मन्त्रीको रुपमा उभ्याइदिएका छन् ।
त्यसो त मन्त्री हुनका लागि सांसद हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यहाँनेर भने उनले मतदातालाई प्रष्ट भनेका छन्, ‘तपाईंहरु उहाँहरुलाई ९उम्मेदवार० जिताउनुस्, मन्त्री बनाउने काम मेरो भयो ।’ ओलीले भावी मन्त्रीको रुपमा चर्चा गरिदिएका उम्मेदवारले चुनाव जित्लान् या नजित्लान्, यो त नजिता नआउँदासम्म कुर्नै पर्छ ।
यसरी ‘छोरो पाउने कहिले–कहिले, कन्दानी बाट्ने अहिले’ भनेजस्तो, परिस्थिति निश्चित नहुँदै भावी मन्त्री तोक्ने ओलीको गतिबिधि केबल ‘चुनावी स्टन्ट’मात्रै हो कि भन्ने लाग्छ ।